OMG Solutions - လိမ်လည်လှည့်ဖျားနေသောအိမ်ထောင်ဖက်ကိုဖမ်းမိရန်စင်္ကာပူသည် Hidden Spy Mini Camera
လိမ်လည်လှည့်ဖျားမှုကိုဖမ်းစားရန်အတွက်စင်ကာပူသည် Hidden Spy Mini Camera ဖြစ်သည်
SPY372 - OMG 4G WiFi ကင်မရာ (Facebook Livestream ကိုထောက်ပံ့သည်)
SPY371 - OMG WiFi ဝှက်ထားသော SPY ကင်မရာစမတ်ဖုန်း
SPY408 - OMG WiFi ဝှက်ထားသော SPY ကင်မရာနံရံကပ်နာရီ
SPY415 - OMG WiFi လျှို့ဝှက် SPY ကင်မရာအီလက်ထရောနစ်ပြက္ခဒိန်နာရီ
SPY414 - OMG WiFi ဝှက်ထားသော SPY ကင်မရာအသံချဲ့စက်
SPY420 - OMG WiFi ဝှက်ထားသော SPY ကင်မရာမျက်မှန်
SPY417 - OMG WiFi ဝှက်ထားသော SPY ကင်မရာအရေးပေါ်မီးသတိပေးစနစ်
SPY400 - OMG WiFi Hidden SPY Camera Light Bulb Camera ဖြစ်သည်
SPY339 - လျှို့ဝှက်ကင်မရာနှင့်အသံအသံဖမ်းစက်ပါသည့် OMG Spy Pen
SPY418 - OMG WiFi Hidden SPY Camera Fire Alarm Bell S $ 298 ဖြစ်သည်
SPY416 - OMG WiFi Hidden SPY ကင်မရာမီးနှိုးစက် Siren Strobe S $ 298
SPY353 - OMG WiFi ဝှက်ထားသော SPY ကင်မရာ Peep Hole
SPY412 - OMG WiFi ဝှက်ထားသော SPY 4K ကင်မရာပါဝါ Socket
SPY411 - OMG WiFi ဝှက်ထားသော SPY ကင်မရာတစ်သျှူးသေတ္တာ
SPY410 - OMG WiFi ဝှက်ထားသော SPY ကင်မရာမုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်
SPY409 - OMG WiFi ဝှက်ထားသော SPY ကင်မရာနှိုးစက်နာရီ
SPY406 - OMG WiFi ဝှက်ထားသော SPY ကင်မရာလက်ကိုင်အိတ်
SPY405 - OMG WiFi ဝှက်ထားသော SPY ကင်မရာ Lucky Cat
SPY402 - OMG WiFi ဝှက်ထားသော SPY 4K ကင်မရာပါဝါ Socket USB Charger
SPY401 - OMG WiFi လျှို့ဝှက် SPY ကင်မရာကွန်ပျူတာမောက်
SPY379 - OMG ဒစ်ဂျစ်တယ်နာရီဝှက်ထားသောသူလျှိုကင်မရာ
SPY370 - OMG 4G Wifi ဘက်ထရီ Mini Hidden Spy Camera
SPY383 OMG နှိုးစက်နာရီ လျှို့ဝှက်ထောက်လှမ်းရေးကင်မရာ
SPY381 - OMG အမျိုးသားများဇစ်ချည်ထားသော Hidden Spy Camera
SPY385 - OMG ကြိုးမဲ့ iPhone / Android ဖုန်းအားသွင်းကိရိယာ Hidden Spy Camera
SPY378 - Mobile Phone Dock Charger Wifi 4K 25K Hidden Spy Camera (သြဂုတ် ၂၅ တွင်ရနိုင်သည်)
SPY376 - OMG WIFI Desk Alarm Clock Hidden Spy Camera (အသစ်၊ preorder သာ !!)
SPY375 - OMG 4K Wifi Power Socket Hidden SPY Camera (အသစ်၊ ကြိုတင်မှာယူမှသာ !!)
SPY374 - OMG Wifi တိုက်ရိုက်လွှင့်သော Power Bank Hidden Spy Camera
SPY366 - OMG GLADE အနံ့အရသာရှိတဲ့ Gel Hidden Spy Camera
SPY088B - OMG လေမှုတ်စက်အလိုအလျောက်လေချိုမှုန်ရေမွှားဖြန်းထားသောသူလျှိုကင်မရာ
SPY365 - OMG ဝိုင်ဖိုင် Hidden Spy CCTV Bluetooth Speaker Table Desk / Lamp Camera
SPY361-PEN - ဝှက်ထားသော SPY ဗွီဒီယို / အသံပင်လုံကင်မရာ *
SPY358 - ဝိုင်ဖိုင်မျက်မှန်
SPY348 - OMG SPY USB Charger 4K ကင်မရာ (3 Pin UK Plug)
SPY350 - HM မှန်ဘီလူးပါ ၀ င်သည့် OMG Spy Table Clock 4K Camera
SPY344 - OMG Wifi ရေဘူးပုလင်း 4K ကင်မရာ
SPY355 - OMG ခရီးဆောင်အသံပြောင်းလဲခြင်း
SPY336 - OMG SPY ကားလန်းဆန်းစေသည့်ဝှက်ထားသောကင်မရာ၊ 4K
SPY356 - OMG SPY မျက်မှန်အသံ & ဗွီဒီယိုကင်မရာအသံဖမ်းစက်
SPY362 - WIFI ဝှက်ထားသောသူလျှိုသေတ္တာကင်မရာ
SPY272 - OMG WIFI Powerbank ကင်မရာ၊ HD 2K / 1080P, Nightvision၊ SD Card Max 128GB, 10000mAh ဘက်ထရီ
SPY264 - OMG WIFI Ashtray ကင်မရာ 4K / 2K / 1080P, ဘက်ထရီအလုပ်လုပ်ချိန် ၁၈ နာရီ
SPY202 - OMG WiFi သူလျှိုများရှာဖွေတွေ့ရှိမှု၊ Loop မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်ဖုန်းအားသွင်းခြင်းတို့ပါ ၀ င်သည့် 5-USB Port Charger ကင်မရာ
SPY184 - Motion Detection ပါသည့် OMG Photo Frame Wi-Fi ဝှက်ထားသောကင်မရာ
SPY088 - OMG Glade Automatic Spray Air Refresher Spy Camera၊ နာရီ ၇၀ အထိဘက်ထရီသက်တမ်းနှင့်နာရီ ၁၀၀ အသင့်အနေအထား
SPYV025 - နာရီ ၃၀ အထိအသံသွင်းနိုင်သောအဝေးထိန်းကားအသံမှတ်တမ်း
SPY368 - OMG 4G ဘက်ထရီ Wifi Mini Hidden Spy Camera
SPY369 - ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းအတွက်အိတ်ဆောင် 4G HD PTZ ကင်မရာ
SPY324 - OMG 4G LTE ကြိုးမဲ့ WiFi လုံခြုံရေးစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းညအိပ်မက်ဖြင့်အိမ်သုံးကင်မရာ၊ ၂ လမ်းသွားအသံ
SPY318 - ဆိုလာစွမ်းအင်သုံး CCTV တပ်ဆင်ထားသောအပြင်ဘက်တွင်ကြိုးမဲ့ 3G 4G လုံခြုံရေး IP ကင်မရာ
SPY268 - OMG WIFI Clock Camera HD 4K / 2K / 1080P AVI, နှစ်ဘက်ဆွေးနွေးချက်ပါ ၀ င်သောစပီကာ
SPY247 - OMG စတုဂံပုံ WIFI နာရီကင်မရာ၊ HD Video 4k / 2k / 1080p, Nightvision၊ WIFI / P2P / IP, 128G
SPY237 - Night Vision ပါ ၀ င်သော OMG WIFI နာရီ Bluetooth Bluetooth Speaker
SPY227 - WIFI Bluetooth Speaker များသည်လျှို့ဝှက်ထောက်လှမ်းရေးကင်မရာ၊ 1080P HD Night Vision 170 ° Angle နှင့် Real Time View
SPY271 - Super Night Vision ဖြင့် OMG WIFI မီးခွက် ၁၈၀ ဒီဂရီကင်မရာလည်ပတ်ခြင်း
SPY082 - Night Vision နှင့် Motion Detection ရှိသော OMG WIFI IP Bulb Camera
SPY030 - OMG မီးခွက်လျှို့ဝှက်ကင်မရာ
SPY220 - OMG2Gang WIFI အမှတ်တံဆိပ် Socket Outlet SPY ဝှက်ထားသောကင်မရာ၊ ၇၀ နာရီမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်နာရီ ၁၀၀ စောင့်ဆိုင်းနေသောအချိန်
SPY210 - Motion Detection နှင့်အတူ OMG WIFI Wall Charger Camera HD1080P
SPY286 - OMG WIFI Calculator ကင်မရာ 4K
SPY094 - OMG တစ်ရှူးသေတ္တာကင်မရာ
SPY358-PBANK - လျှို့ဝှက်ဝှက်ဖိုင် Wifi ပါဝါဘဏ်ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်သူ
SPY207 - Motion Detection နှင့်အတူ OMG ရေပုလင်းကင်မရာ HD 1080P
SPY118 - သေးငယ်သော Lighter Hidden Camera - TF Card ကိုထောက်ပံ့သည်
SPY117 - OMG ပိုမိုပေါ့ပါးသောကင်မရာ Hd spy camera 1080P စစ်မှန်သောပေါ့ပါးသောကင်မရာ
SPY076 - အိတ်ဆောင် OMG 1280 × 960 HD စပိုင် Spy Water Cup ဝှက်ထားသောကင်မရာ
SPY052 - OMG ပိုက်ဆံအိတ်ကင်မရာ၊ SD ကဒ်မက်စ် ၃၂ ဂစ်၊ ၁၀ နာရီ၊ ကြိုးမဲ့အဝေးထိန်း
SPY255 - OMG Clip WIFI SPY ညဘက်မြင်ကွင်းနှင့်ဝှက်ထားသော Wide Lens Camera
SPY197 - Motion Detection နှင့် Night Vision ပါ ၀ င်သည့် OMG Dice Mini Camera
SPY152 - Night Vision ပါ ၀ င်သည့်အိတ်ဆောင်ဖုံးကွယ်ထားသော OMG Mini Hidden Spy Camera
SPY134 - 160 Degree View နှင့် Night Vision ရှိသော OMG Mini WIFI Camera
SPY131 - ညဘက်မြင်ကွင်း ၈ မီတာအထိညဘက်မြင်ကွင်းပါရှိသော Mini WIFI ကင်မရာ
SPY123 - ရွေ့လျားမှုအသေးအဖွဲ OMG 1920 x 1080 Resolution HD ဒီဂျစ်တယ်ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းများ
SPY120 - သေးငယ်သောလက်မအရွယ်အစားရှိကင်မရာသည် Motion Detection ပါရှိသည်
SPY083 - Motion Detection ပါသည့် OMG WIFI Mini ဝတ်ဆင်နိုင်သောကင်မရာ
SPY017 - OMG အသေးစားအိတ်ဆောင် Mini Spy Hidden Camera
SPY333 - OMG SPY ဝှက်ထားသောသံလိုက်စက်ရုပ်ကင်မရာ
SPY283 - OMG WIFI Pinhole ကင်မရာ၊ ဘက်ထရီ ၁၀၀ အထိခံနိုင်သည်
SPY301 - အလင်းရောင်နိမ့်ကျသော 2K နာရီကင်မရာ၊ HD1296P / 30fps, H.264 MOV, 16G တွင်တည်ဆောက်ထားသောရေစိုခံ။
SPY312 - OMG လက်ပတ်ကြိုး Spy Hidden Camera
SPY085 - OMG WIFI စောင့်ကြည့်ရေးကင်မရာ
SPY055 - OMG WIFI ဟတ်ကင်မရာဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်စက်၊ ၅၀ Mega Pixels
SPY068 - OMG ဝတ်ဆင်နိုင်သောအဘယ်သူမျှမ Hole သူလျှိုဗီဒီယိုမျက်လုံးမျက်မှန်များ
SPY064 - OMG အားကစားနေကာမျက်မှန်များ ၁၂၀ ဒီဂရီအကျယ်ထောင့်မှန်ဘီလူးပါသောဗီဒီယိုကင်မရာ
SPYV034 - အသံအသံဖမ်းစက်နားကြပ်ကို SPY
SPYV033 - အသံအသံဖမ်းစက်နားကြပ်ကို SPY
SPYV015 - OMG Mini Keychain အသံဖမ်းစက်၊ အဆင်သင့်အနေအထားအရ ၆၈ နာရီ၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း ၂၈ နာရီ
SPYV012 - OMG Pendant Voice Recorder၊ အရွယ်သေးငယ်တဲ့၊ WAV 192Kbps 48KHz၊ ဘက်ထရီအချိန် 20 နာရီ၊ 8GB, အသံအစပျိုးခြင်း
SPYV009 - OMG Mini USB Thumb Drive / Pen Drive SPY အသံအသံဖမ်းစက်ကင်မရာ
SPYV006 - OMG သံလိုက်ကလစ်အသံကြည်လင်သောအသံအသံဖမ်းစက် ၂၈၈ နာရီကြာမြင့်စွာမှတ်တမ်းတင်ထားသည်
SPYV003 - OMG ဒီဂျစ်တယ်အသံဖမ်း၊ စံချိန် ၂၈၀ နာရီ၊ ဘက်ထရီ ၁၅ နာရီ၊ ၁၆ ဂစ်
SPYV002 - OMG Mini Pocket Pen ဒစ်ဂျစ်တယ်အသံအသံဖမ်းစက်၊ ၈ ဂစ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ၁၀ နာရီမှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊
OMG Solutions Clients များ - ပါလီမန်အိမ် singapore
လုလင်ပျို Solutions Clients - Zincode Technologies က Pte Ltd
OMG Solutions Client - အုန်းသီး
OMG Solutions Client - အာလူးထောင့်
OMG Solutions Client - မာလာ
OMG Solutions Client - Swatow ပင်လယ်စာစားသောက်ဆိုင်
OMG Solution လိုင်း - ခန္ဓာကိုယ် ၀ တ်စုံသုံးကင်မရာ - SPH
OMG Solution လိုင်း - ခန္ဓာကိုယ် ၀ တ်စုံသုံးကင်မရာ - Mediacorp
OMG Solutions ဖောက်သည်များ - SPY - X Terminate
OMG Solutions Client - SMRT ဖြစ်သည်
OMG Solution Client - အမှားရှာဖွေစက် - Anglo Chinese ကျောင်း
OMG Solution လိုင်း - အမှားရှာဖွေစက် - Wisma Atria
OMG Solution လိုင်း - Boulevard V2
124366 စုစုပေါင်း Views စာ 1 Views စာယနေ့တွင်